Mafoni ePixel anogona kukurumidza kufambisa mapurogiramu kumaChromebook kana maPC ane Android 13
Android 13 DP1 inovimbisa kusanganisa kwakadzama neChrome OS uye Windows michina. Zvaunoda kuziva Google inogona kugonesa kutenderera Android maapuro kuChromebook kana Windows MaPC ane Android 13. Iko kugona kutsva kwakawanikwa mune yekutanga dhizaini preview yeinotevera vhezheni yeAndroid. Ichi chiitiko chemuchinjiko-chishandiso chichagadzira chiratidziro chechokwadi uko maapplication ako acha… [Verenga zvakawanda ...] nezve mafoni ePixel anogona kukurumidza kufambisa mapurogiramu kumaChromebook kana maPC ane Android 13
Google Pixel inopeta foni: Zvinotaurwa nerunyerekupe
Iko kunoramba kuine nhaurirano nezve mukana wekupeta Pixel kubva kuGoogle. Nemafoni ekupeta anoonekwa sechinhu chikuru chinotevera, hazvishamise kuti mhando dzinofarira kuti tekinoroji inogona kutitora kupi, nemujaho wekupwanya ichi (ikozvino) chikamu chemusika. Hezvino zvese zvaunoda kuziva nezve kupeta Pixel. Ichanzi chii? Kunyange vazhinji… [Verenga zvakawanda ...] nezveGoogle Pixel kupeta foni: Zvinotaurwa nerunyerekupe
Android 13: Zuva rekuburitsa, maficha, dhizaini yekuongorora, nezvimwe
Kunyange zvazvo inonzwa sokuti Google ichangobura Android 12, kambani iri kutobudisa yekutanga dhizaini preview ye Android 13. Chii chinonzi Android 13 developer preview? Android 13 ndiyo huru mobile operating system update. Asi haisati yave kuwanikwa kuti vatengi vaise pamafoni avo eAndroid uye mahwendefa. Ongororo yekuvandudza ingori vhezheni yekutanga yeApple 13… [Verenga zvakawanda ...] nezve Android 13: Zuva rekuburitsa, maficha, dhizaini yekuongorora, nezvimwe
Pixel 6's mashiripiti eraser chimiro chinoputika mushure mekuvandudzwa
Iyo ficha inoita kuti ubvise zvinhu zvausingadiwe kana vanhu kubva pamifananidzo.Mufananidzo naAmelia Holowaty Krales Iyo Google Pixel 6's magic eraser feature, iyo inoita kuti ubvise vanhu vasingadiwe kana zvinhu pamifananidzo yako, inoratidzika kunge yakatyorwa nekuvandudzwa kwemazuva ano, PhoneArena inoshuma. Vazhinji vashandisi muReddit neTwitter vari kutaura kuti kuyedza kuishandisa kunokonzera Google… [Verenga zvakawanda ...] nezvePixel 6's mashiripiti eraser chimiro chinoputika mushure mekuvandudzwa
Huawei P50 Pro Ongororo: Mureza wekudada nawo
Makore mazhinji apfuura, Huawei aive mambo pakati pe smartphone OEMs muChina uye muEurope. Nemidziyo yakanakisa yakarongedzerwa neprimiyamu hardware uye ine hunhu hwesoftware ruzivo, nhare dzekambani, kune vamwe, dzaive musimboti wezvingave Android. Yakazununguswa nezvirango zvakatemerwa nehurumende yeUS, kambani yakanetsekana kuwana mafambiro ayo mumakore apfuura, ine pivot yakanangana… [Verenga zvakawanda ...] nezveHuawei P50 Pro Ongororo: Mureza wekudada nawo
Samsung Galaxy S21 FE 5G ongororo: Foni yefani yakakodzera kuve nayo?
Samsung inoita kunge yatora iyo FE - 'Fan Edition' - sechinhu chakanaka, kuishandisa senzira yekuunza chimwe chishandiso pamusika nemitengo ine hukasha, kana mhando dzemureza dzabuda munzira. Sezvakaita Samsung Galaxy S20 FE, iyo Galaxy S21 FE inosvika sekunge yabuda muS21's mold, nemutengo wakachipa, mashoma tweaks pano neapo, asi zvakanyanya kufanana ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Samsung Galaxy S21 FE 5G ongororo: Foni yefani yakakodzera kuve nayo?
YouTube inoita kuti mavhidhiyo akazara abatsire neUI yakagadziridzwa
Ita zvakawanda usingasiye iyo yakazara-skrini chiitiko. Chii chaunoda kuziva YouTube inounza yakagadziridzwa yakazara skrini yevhidhiyo UI kune yayo nharembozha. Iyo UI inogonesa zviito zvakasiyana sekuda vhidhiyo, kuwedzera kune yekutamba, kana kutumira mhinduro. Iyo UI nyowani inofanirwa kunge ichitenderera kune vashandisi veAndroid izvozvi. YouTube iri kuita shanduko refu-yakareba kune yayo yakazara skrini UI pane yayo ... [Verenga zvakawanda ...] nezveYouTube inoita kuti mavhidhiyo akazara abatsire neUI yakagadziridzwa
Android 13 "Tiramisu" Details Leak Pamberi Mazhinji Mafoni Atora Android 12
Iwe uchiri kumirira Android 12 kuti isvike pafoni yako, asi Google yave kutoshanda pane inotevera iteration yenharembozha yayo OS-Android 13. Codenamed "Tiramisu," iyo Android 13 yekuvandudza inogona kusanganisira toni yeanouraya maficha matsva, senge opt. -muzviziviso zveese maapplication. Matani emukati ekuvandudza skrini akawanikwa neXDA Vagadziri anoratidza mashoma eiyo Android 13 maficha. Zve… [Verenga zvakawanda ...] nezve Android 13 "Tiramisu" Details Leak Pamberi Mazhinji Mafoni Tora Android 12
Heano maitiro ekugadzirisa Google Pixel 6's inoshungurudza skrini yekuomesa nyaya
Iyo Pixel 6 nePixel 6 Pro ndedzimwe dzemhando yepamusoro mureza dziripo pamusika izvozvi. Kubva kumakamera ane simba uye mukati-mumba Tensor chipset kusvika kune inofungisisa software ruzivo, Google ichangoburwa nharembozha dzine zvese zvaungade kubva kune yemazuva ano mureza. Nepo iyo Pixel 6 yakatevedzana yakawana ongororo yakanaka kubva kune vatsoropodzi, zvinoita sekunge vashandisi vekupedzisira havana… [Verenga zvakawanda ...] nezve Heano maitiro ekugadzirisa Google Pixel 6's inoshungurudza skrini yekuomesa nyaya